“स्वाभिमानी कार्यकर्ता सवल काँग्रेस समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार” – Gulmiews
“स्वाभिमानी कार्यकर्ता सवल काँग्रेस समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार”
August 20, 2015 Sanju Kauchha
No comments	‘विकास जनताको लागि अधिकार बनेर घर घरमा पुग्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता राखेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका काँग्रेस गुल्मी क्षेत्र नं. ३ का सभापति दामोदर भुसाल हाल काँग्रेसमा निकै क्रियाशील युवा नेताका रुपमा चिनिनुहुन्छ । काठमाडौ शिक्षा क्याम्पसका स्ववियू सभापति भईसक्नु भएका भुषाल पूर्व नेविसंघका विदेश विभाग प्रमुख समेत भईसक्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसको आसन्न जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदका आकांक्षी हुनुहुन्छ । हाल उहाँले जिल्लामा करेसाबारी कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा चलाउँदै आउनुभएको भएको छ । यो अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा चलाउनुपर्ने मान्यता पनि उहाँको छ । काँग्रेसी कार्यकर्ताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र आगामी अधिवेशनले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसग अपटुडेट साप्ताहिका लागि गरिएको कुराकानी :
यहाँ नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ अहिले मुलुकलाई कांग्रेसले कता लैजादै छ ?
नेपाली कांग्रेस मुलुकको सवैपरिवर्तनको नेतृत्वदायी पार्टी हो, यसले जे निर्णय गरेर अगाडि वढ्छ त्यो मुलुको मार्ग वन्छ । अहिले दोस्रो संविधान सभा पश्चात नेपाली कांग्रेस संविधान सभाको सवैभन्दा ठूलो पार्टी वन्यो । यसको काधमा संविधान निर्माण र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने महान जिम्मेवारी छ । त्यो जिम्मेवारीमा पार्टीको नेतृत्व तहदेखि हामी जिल्ला स्तरको नेतृत्वमा बस्ने साथीहरु सवै लाग्नुपर्ने र लागि रहेको छौँ ।
के संविधान आउँछ त ?
संविधान आउनैपर्छ । नेपाली जनतालाई सँधैभरी अनिश्चिततामा राखेर राजनीतिक दल उम्किन पाउँदैनन् । त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान लेख्ने संकल्पसहित क्रियाशील रहेको पार्टीको हैसियतले यो अवसरलाई भरपुर प्रयोग गर्दै संविधान ल्याउँछ ।
गुल्मी जिल्लाको काँग्रेसको अबको बाटो के ?
काँग्रेसका स्थानीय निकाय एवं कार्यकर्ताहरुको जिम्मेवारी आन्तरिक निर्वाचन र आम निर्वाचनका क्रममा मात्र प्रर्दशित हुन्छ । अन्य समयमा यो निश्क्रिय रहन्छ । यसको क्रियाशीलतालाई नियमति गरि स्थानीय विकास निर्माण, उत्पादन कार्यमा जुट्नुका साथसाथै स्थानीय तहमा देखिने समस्याको समाधानमा केन्द्रीत भएर अगाडि जानेछ । काँग्रेसका स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरु जबसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् तबसम्म सबल काँग्रेस निर्माण हुन सक्दैन र सबल काँग्रेसको अभावमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । तसर्थ, हामी “स्वाभिमानी कार्यकर्ता सवल काँग्रेस समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार” भन्ने मान्यतासहित स्थानीय तहका काँग्रेसका कार्यकर्तालाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने दिशामा चिन्तित छौँ । साथै हामीलाई यो पनि विश्वास छ, नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु इमान्दार, सृजनशील, क्षमतावान् विवेकशील छन् । यिनै विशेषतालाई विकास तथा उत्पादनसँग जोड्नका लागि नियमित छलफल सम्वाद, बैठक, जरुरी छ । यसो हुँदा स्थानीय तहमै समस्याको पहिचान र तिनको समाधानका उपाएहरु भेटिन्छन् ।
जिल्लामा विकास निर्माणको कार्यहरु कसरी अगाडि बढिहरहेका छन् ?
निश्चयपनि गुल्मी जिल्लामा पछिल्ला दिनमा विकास निर्माण विशेष गरि सडक निर्माणको क्षेत्रमा ठूला ठूला आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक, रिडी–रुद्रवेणी–वामी सडक, तम्घास–नयाँगाउँ–प्युठान सडक, बहुवर्षीय ठेक्का भई कार्य भईरहेका छन् । अन्य २०÷२२ वटा सडकहरु पी–१ सडकका रुपमा सञ्चालित छन् । गुल्मीमा ७४ वटै गाविसको केन्द्र, १ नगरपालिकाको हरेक वडाको केन्द्रभागमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । हरेक नागरिकले कम्तीमा २० मिनेटको पैदल यात्रामा सडकको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्र्तगत पहाडका बीच भाग जोड्ने तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने रिङ्गरोड सडकको निर्माणमा जुटिरहेका छौँ ।
गुल्मीमा क्षेत्र नं. १ र २ को अधिकांश बस्तीमा विद्युतीकरण भएपनि क्षेत्र नं. ३ मा अझै २० गाविस अन्धकारमा छन् । यी ठाउँहरुमा विद्युतीकरण गर्ने काम द्रुत गतिमा चलिरहेको छ । यदि हुँदाहुँदै पनि स्थानीय संयन्त्रका केही तिता अनुभूति रहेका छन् । राजनीतिक संयन्त्रलाई सिर्जनशील र स्वतन्त्र बनाउन नसक्दा आशा गरिएजति विकास जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन । योजना छनौटका चरणहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित छन् । एकैथरी मानिसहरुले जिल्लादेखि गाउँका योजना छनोटमा सहभागि हुने हुँदा लक्षित वर्गको र क्षेत्रको भावना विकास निर्माणमा प्रतिविम्बित गर्न सकिएको छैन । उपभोक्ता समितिमा रहेका मानिसहरु नै राजनीतिक संयन्त्रमा बस्ने गर्दा विकास समानुपातिक रुपमा हुन सकेको छैन । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि संयन्त्रमा रहने मानिसहरुको निगाहमा विकासलाई अगाडि बढाउँदा विकास जनताको अधिकार नभई संयन्त्रमा रहेका मानिसहरुको राजनीतिक एवं आर्थिक लाभलाई लक्षित गरि सञ्चालित भईरहेका छन् । परिणाम विकासले निकासलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
यो कसरी बदलिन्छ त ?
राजनीतिक दलको संयन्त्रलाई चुनौती दिने कार्य त्यति सजिलो त छैन । संयन्त्रमा रहने मानिसहरुको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न सक्दा केही परिवर्तन आउन सक्छ । स्थानीय निर्वाचन नहुँदासम्मको लागि उपभोक्ता समितिमा रहेका मानिसहरुलाई योजना छनोट गर्ने प्रक्रियामा सहभागि नगराउने, सँधैभरी एउटै मान्छेलाई जिल्लाको विकास योजना छनोटमा सहभागि नगराउने । संयन्त्रमा जाने मानिसहरुले आफ्नो राजनीतिक दलभित्र छलफल, सम्वाद गरि गरिएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने । स्थानीय निर्वाचन छिटो गरि स्थानीय सत्ता कर्मचारीबाट जनतामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने ।
गुल्मी जिल्लाको उत्पादन र रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
गुल्मी जिल्ला धेरै नेता भएको, प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि उच्च पदस्थदेखि तलसम्म धेरै कर्मचारी रहेको, धेरै विद्धानहरु रहेको जिल्ला हो । तथापि यहाँको विकासले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकेको छैन । परिणाम बसाई सराईले गुल्मी जिल्लाको जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ । लाखौँ युवाहरु रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुकहरुको शरणमा छन् । कृषि उत्पादनले स्थानीय उपभोगलाई थेग्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सले उत्पादन र उपभोग प्रवृत्ति अतिक्रमित हुँदा सो उत्पादन नगग्य छ । जनस्वास्थ्यामा जघन्य रोगहरुले प्रतिकुलता थप्दै छ । यसर्थमा राजनीतिक कर्मी, प्रशासक, कर्मचारी सबैले आ–आफ्नो कर्मको मूल्याँकन गर्न जरुरी छ । ताकि भोलिका दिनमा हाम्रो विकासले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक असुरक्षाको कसैले गर्न नपरोस् ।
तपाई करेसाबारीको कुरा गर्नुहुन्छ । अबको दिनमा करेसाबारीले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्छ र ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद ! हाम्रो क्षेत्रमा मैले अघिनै भनेजस्तै रेमिट्यान्सको कारणले उपभोगक संस्कृतिमा ठूलो असर पारेको छ । आगनीको डिलमा, घर वरिपरि सजिलै उत्पादन हुने टमाटर, खुर्सानी, धनियाँ, सागपातलगायतका बस्तुहरुको उत्पादन नगरि आयातित बस्तुको उपभोग बढिरहेको मात्र छैन, चाउचाउमै तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने संस्कृतिले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पराधिन बनाउँदै लगेको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर स्वयंको उपभोगका लागि करेसाबारीले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । यसले प्राङ्गारिक बस्तुको उत्पादन हुने हुँदा जनस्वास्थ्यमा अनुकुलता थप्छ । कृषिका स्थानीय जातिको संरक्षण गर्छ । आयआर्जन र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्छ । र व्यक्तिलाई कर्म गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्छ । परिणाम व्यवसायिक कृषिका लागि आधार तयार हुन्छ । यसर्थमा हामीले करेसाबारी कार्यक्रमलाई कृषि व्यवसायिकरणका लागि प्रवेश विन्दुको रुपमा लिँदै गुल्मीका हरेक घरलाई करेसाबारी सजाउने अभियानलाई अगाडि बढाईरहेका छौँ । यो अभियान राष्ट्रिय रुपमै सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।
Comments comments	Related Posts	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	September 14, 2016	लक्ष्य अर्कै थियो सञ्चारकर्मी बने – अनिता खत्री...	August 30, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	राति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने